Salamo 37:1-21 "1 Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao noho ny amin’ny mpanao ratsy; Ary aza mialona ny mpanao meloka; 2 Fa hojinjana faingana tahaka ny ahitra izy ka halazo tahaka ny ahi-maitso. 3 Matokia an’i Jehovah hianao, ka manaova soa, dia honina amin’ny tany hianao ka ho faly amin’ny fahamarinana. 4 Ary miravoravoa amin’i Jehovah hianao, dia homeny anao izay irin’ny fonao. 5 Ankino amin’i Jehovah ny làlanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka. 6 Ary hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava Izy, Ary ny rariny ho anao tahaka ny mitataovovonana. 7 Miantombena tsara miandry an’i Jehovah hianao ka manantenà Azy; Aza tezitra amin’izay ambinina amin’ny lalany dia amin’izay olona manao sain-dratsy. 8 Mitsahara amin’ny fahatezerana, ary mahafoiza ny fahavinirana; aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao; fa ratsy no hiafaran’izany. 9 Fa ny mpanao ratsy hofongoro-na; Ary izay miandry an’i Jehovah no handova ny tany. 10 Fa rehefa afaka kelikely, dia tsy hisy ny ratsy fanahy; Handinika ny fonenany hianao, fa tsy ho hita izy. 11 Fa ny mpandefitra kosa no handova ny tany ka hiravoravo amin’ny haben’ny fiadanana. 12 Ny ratsy fanahy manao hevi-dratsy hamelezana ny maraina ka mihidy vazana aminy. 13 Ny tompo mihomehy azy, satria hitany fa ho tonga ny androny. 14 Ny ratsy fanahy nampitsoaka ny sabany ka nanenjana ny tsipìkany Mba hampikarapoka ny ory sy ny malahelo Ary hamono ny mahitsy làlana. 15 Ny sabany hitsatoka amin’ny fony ihany, ary ny tsipìkany ho tapatapaka. 16 Tsara lavitra ny kely ananan’ny olona marina anankiray Noho ny be ananan’ny ratsy fanahy maro. 17 Fa ny sandrin’ny ratsy fanahy ho tapatapaka; Fa Jehovah manohana ny marina. 18 Fantatr’i Jehovah ny andron’ny mahitsy; Ary ny lovany ho mandrakizay. 19 Tsy mba ho menatra amin’ny andro fahoriana ireny; ary amin’ny taona mosarena dia ho voky izy. 20 Fa ny ratsy fanahy haringana, ary ny fahavalon’i Jehovah ho tahaka ny voninahitry ny saha; Ho levona izy, eny, ho levon-ko setroka izy. 21 Misambotra ny ratsy fanahy, nefa tsy manohitra; Fa ny marina kosa mamindra fo ka manome."
Safidy: Ny tenako aloha! Izay hahazoako tombontsoa amin’ny fomba rehetra, na iza voa mafy na iza matiantoka. Raha jerena maimaika dia toa maharesy, mahomby, tafavoaka ireny olona ireny raha oharina amin’ireo mitandrintandrina fitondran-tena, mitsinjo ny hafa, ilaozana midonàka miandry ny Tompo fa tsy mihetsiketsika. Ny Tenin’Andriamanitra nefa eto dia manoro hevitra mba hipetraka, haharitra, hanantena ny Tompo (3-11). Misy vokany tsara lavitra ny fatokiana ny Tompo: ho lavorary ny dia, ho azo izay irina, ary indrindra, hiaina am- pilamianana eto an-tany. Koa nahoana moa no ho tezitra na hialona amin’izay fiadanana mandalo kely ananan’ny ratsy fanahy? Tsarovy fa Andriamanitra dia Tompon’izao rehetra izao, Andriamanitra velona, manana ny fahefana ambony indrindra ary mikendry ny soa ho an’ny olony. Koa matokia Azy. Tsy misy atahorana mihitsy na ankinina tanteraka aminy aza ny momba anao rehetra. Mijinja izay nafafiny. Rehefa avy nametsifetsy sy nanitsakitsaka ny marina ny ratsy fanahy, dia mety ho faly vetivety nahazo izay notadiaviny. Tsy mianona amin’izany izy fa enjehin’ny eritreriny ka te hamono ny ory sy mahantra izay efa resiny (14). Saingy ihomehezan’ny Tompo, izay mahalala ny ho avy izy (13). Hofongorana, hanjavona, halazo, haringana, ho levona ny ratsy fanahy. Ny tsara fanahy kosa, na kely aza ny ananany dia ho finaritra ombam-piadanam-be izy eto amin’ity tany ity (11). Tsy ho sahirana amin’ny krizy ara-toekarena fa hanana izay ilainy (19), hotsimbinin’ny Tompo manokana.
Safidio ary izay tianao na fiadanana ara-materialy vetivety na fiadanam-po maharitra.